အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ် Elfin Smart Door Controller for Time Attendance, အချိန် Recorder များအတွက် Elfin စမတ်တံခါး Controller, Intelligent Attendance Access Control Controller, အသိဉာဏ်တက်ရောက် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို
Password keyboard, text display, single access control, တက်ရောက်သူ, two door access controller functions in one.
အလုပ်လုပ်ဗို့: DC က 8 ~ 15V
ပါဝါစားသုံးမှု: <1W က
ချွေတာဒေတာများ: >10 နှစ်ပေါင်း (ပါဝါပျက်ကွက်ပြီးနောက်)
စုစုပေါင်းဖမ်းယူရေး: 25000 အပိုင်းပိုင်း (သင့်အောင်လုပ်နိုင်သော)
Card ကိုထိန်းချုပ်မှု: 2500 အပိုင်းပိုင်း (သင့်အောင်လုပ်နိုင်သော)
LCD ကို resolution ကို: 12232 စက်×
Build-in ကိုစကားလုံးအခြေစိုက်စခန်း: 1616 အမျိုးသားရေးလူတန်းစားနှစ်ခုကိုဇာတ်ကောင်အခြေစိုက်စခန်း×.
ဆက်သွယ်ရေး mode ကို: တဦးတည်း RS485
Wiegand 26 port ကို: နှစ်
relay output ကို: နှစ်
ပြည်နယ် input ကို: လေး
Card ကိုစာဖတ်ခြင်းအမျိုးအစား: သဟဇာတသဟဇာတသို့မဟုတ် Mifare EM
induction အကွာအဝေး: 4~ 15cm
networking စွမ်းရည်: 255 အစုံ
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -20℃ ~ + 70 ℃
အလုပ်လုပ်စိုထိုင်းဆ: 20%~ 90%
သိုလှောင်ခြင်းအပူချိန်: -25℃ ~ + 85 ℃
အတိုင်းအတာ: L120 × W88 × H ကို 18mm
FA-168 "Elfin" is an intelligent access control attendance all-in-one machine developed by Seabreeze Smart Card Co.,Ltd, which includes hardware and management software to formacomplete access control and attendance management system. It is integrated with time recorder, PWD door controller, single-door controller, reader with Chinese and English character display and double door controller. It is widely used in door controller, time recorder, real-time patrol and parking lot etc, suitable for large, medium and small companies, စက်ရုံတွေ, ကျောင်းများ, apartments, residential areas, စသည်တို့ကို.
Re-define the IO interface. ဥပမာ, W26 port will be defined as W26 standard output or input, the relay can be defined as door controller, bell or alm output, the sensor can be defined as fire alm signal.
ထောက်ပံ့ 2500 card holders and store 25000 pieces of card reading information and alm events.
I am interested in your product Elfin Smart Door Controller for Time Recorder, အသိဉာဏ်တက်ရောက် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို
prev: အဆောက်အဦးအပြင်ရေစိုခံသတ္တု Touch ကို Button လေး ID ကို IC Card ကို Password ကို Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို
နောက်တစ်ခု: အဆောက်အဦးအပြင်ရေစိုခံ Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို, အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည် ID ကို / IC Card ကို Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို
encryption Card ကိုဆန့်ကျင်မိတ္တူ Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို, encryption Anti-ကိုယ်ပွား ID ကိုကတ် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို
RS485 Signal တိုးချဲ့ဖို့ Wiegand, RS485 Converter ဖို့ Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို Wiegand